ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကိုသာ ဆိုးဝါးစေမည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပြော - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းဆူးပြည်နယ်၊ Lianyungang မြို့၊ Lianyungang ဆိပ်ကမ်းရှိ ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်း၌ ကွန်တိန်နားများ ရပ်နားထားသည်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ မေ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဒဏ်ခတ်ပိတ်မှုများက ငြိမ်းချမ်းရေး မဆောင်ကြဉ်းနိုင်သလို ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကိုသာ ဆိုးရွားလာစေမည်ဖြစ်ကြောင်း အချက်အလက်များက သက်သေပြလျက်ရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်က မေ ၅ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးအဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထူရန်နှင့် ကမ္ဘာ့ထောက်ပံ့ကွင်းဆက် တည်ငြိမ်ရန် ပိုမိုဆောင်ရွက်သွားသင့်ကြောင်း ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ကျောက်လိကျန်းက ပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ခန့်မှန်းချက်မှာ မကြာသေးမီက ၃.၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားကြောင်း နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) ၏ အစီရင်ခံစာအပေါ် မှတ်ချက်ပြုပေးရန် မေးမြန်ခဲ့ရာ၌ ကျောက်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးနာလန်ထူမှုသည် နိုင်ငံများအားလုံးမှ ပြည်သူများ၏ ဘုံစိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုလျက် မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် မသေချာမှုများ ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို အမြဲတစေ အပြုသဘောဆောင်သည့် စွမ်းအင် ပံ့ပိုးကူညီပေးလျက်ရှိကြောင်း ကျောက်က ပြောခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားစီးပွားရေးအချက်အလက်အရ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် နိုင်ငံ၏ ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အရှိန်အဟုန်ကို ဆက်လက်ထိန်းထားလျက်ရှိကြောင်းနှင့် ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာလည်း ဆက်လက်တိုးတက်မှုရှိကာ အားကောင်းသော ကြံ့ကြံ့ခံမှုနှင့် တက်ကြွမှုကို ပြသလျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ထောက်ပံ့ကွင်းဆက်များ တည်ငြိမ်မှုရှိစေရေး၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထူမှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၌ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချမှု တိုးမြှင့်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် နိုင်ငံများအားလုံးနှင့် အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူမှုတွင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ကောင်းမွန်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများလည်း လိုအပ်ကြောင်း ကျောက်က အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
အားနည်း၍ ခိုင်ခံ့မှုမရှိသော ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို ရင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် အခြားလက်တစ်ဆုပ်စာ နိုင်ငံများက ၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အခိုင်အမာစွဲကိုင်ကာ တစ်ဖက်သတ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို တိုးမြှင့်လျက်ရှိကြောင်း ကျောက် ပြောခဲ့သည်။ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ဘဲ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအား ဆိုးဝါးစေခြင်းသာဖြစ်စေသည်ကို သက်သေရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကြီးမားသောဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည် နိုင်ငံအားလုံးရှိ ပြည်သူများကို အမှန်တကယ် ထိခိုက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ပြည်သူများ ရပ်တည်ခွင့်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခွင့်ကို ပိုမိုစဉ်းစဉ်းသင့်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်မှုနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကွင်းဆက် တည်ငြိမ်မှုအား ပိုမိုဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ကျောက်က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, May5(Xinhua) — Facts have already proved that sanctions cannot bring peace but only make the world economy worse,aChinese foreign ministry spokesperson said Thursday.
Spokesperson Zhao Lijian also said that the United States, as the world’s largest economy, should do more that is conducive to the recovery of the global economy and the stability of the global supply chain.
Zhao made the remarks when asked to comment on report that the International Monetary Fund (IMF) recently downgraded its 2022 global economic growth forecast to 3.6 percent.
Noting that economic recovery is the common aspiration of people from all countries, Zhao said that in the face of instabilities and uncertainties, China’s economy has always contributed positive energy to the world economy.
National economic data for the first quarter of 2022 showed that China’s economy has continued to sustain its recovery and development momentum, and its foreign trade and foreign investment continued to improve, showing strong resilience and vitality, he said.
China stands ready to work with all parties to contribute to stabilizing global industrial and supply chains, promoting world economic recovery, and boosting global confidence in development, the spokesperson said.
Zhao also stressed that global economic recovery requires the concerted efforts of the international community.
Facingasluggish and fragile global economy, the United States andahandful of other countries are sticking to their own interests and blindly increasing unilateral sanctions, Zhao said. He said facts have already proved that sanctions cannot bring peace but only make the global economy worse, and the big stick of sanctions is actually hitting the people of all countries.
As the world’s largest economy, the United States should think more about the right to subsistence and development of people around the world, and do more that is conducive to the recovery of the global economy and the stability of the global supply chain, he said. ■
Photo : Aerial photo taken on Dec. 7, 2020 shows containers stacked at the container terminal of the Lianyungang Port in Lianyungang City, east China’s Jiangsu Province. (Photo by Wang Chun/Xinhua)